Le intsha kwaye iyisilumko i-Ikea Starvkind smart air purifier | Ndisuka mac
Namhlanje sifumana iintlobo ezininzi zokucoca umoya kwaye ezinye zazo zinomdla wokwenene. Kule meko, i-Ikea, esele ineentlobo ezininzi zokucoca ikhathalogu yemveliso ebanzi, ibhengeza ngokusemthethweni entsha. Kule meko yi Ikea inkwenkwezi, isicoci somoya esingaphakathi ngaphakathi esifihlwe ngokupheleleyo etafileni kwaye esihambelana neemveliso zeKhayaKit, ke uya kuba nakho ukulawula ukusebenza kwayo kunye nebhulorho yeTradfri.
Isicoci somoya sisebenza ngokuzimela nangona kuyinyani ukuba imisebenzi yayo inokulawulwa kwaye icwangciswe ngokusebenzisa hub ye Ikhonkco le-Tradfri kunye ne-Ikea Home app. Inokufikelela kwi-5 isantya sokusebenza kwaye kunokwenzeka ukuba uyisebenzise kwimowudi "ezenzekelayo" okanye uyicwangcise kwaye ucime umbulelo kwii-automation zeKhayaKit.
Owona msebenzi uphambili wolu hlobo lwesicoci ayikho enye into ngaphandle kokushiya umoya ucocekile ekhaya. Esi sicoci somoya silumkileyo esivela eIkea yenzelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kwangaphakathi, I-Starvkind idizayini ejikelezileyo kwaye isebenzisa inkqubo yokuhluza kathathu ukususa ivumba lomoya, ukususa amasuntswana kunye nokungcola ekhaya.
Okwangoku, ngelixa sibhala eli nqaku, imveliso ayifumaneki ukuba ithengwe kwiwebhusayithi ye-Ikea, ukumiselwa kwesihlambululi esitsha kuqala ngo-Okthobha ka-2021 Ixabiso layo ziidola ezili-129 zokucoca, i-189 yeedola kwikhithi enetafile kwaye ibhulorho ithengiswa yodwa ngeedola ezingama-35.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Le intsha kunye neqondayo i-Ikea Starvkind smart air purifier
I-suite ye-Affinity ihlaziywa ukonyusa ukusebenza